Maqaalka soo socda ayaa markii hore daabacay Xarunta loogu talagalay fayodhowrka waxtarka leh Febraayo 21, 2019. Halkan waxaa lagu daabacaa ruqsad buuxa.
Waxaan jeclahay in aan ka shaqeeyo Dhulka 10,000 Dhallinyaro, iyo waxa mararka qaarkood loo jecel yahay "Land of 10,000 Nonprofits." Waxaanu nahay gobolo kala duwan oo kala duwan oo leh in ka badan 100 luuqadood oo la hadlo iyo gurigooda 11 Native Nations. Minnesota gudaheeda, waxaan ku faannaa qadarin (habka ugu habboon ee loo yaqaan "Midwestern") heerarka sare ee kaqeybqaadashada bulshada. Dawladeenu waxay leedahay heerka ugu sarreeya ee codbixinta ee qaranka, heerarka sare ee tabarucidda, saxafiyiinta madaxa banaan, iyo kuwo kaloo badan. Hase yeeshee, ma naga difaacayno ciriiriga iyo is-aaminsanaanta in ay ku kaceen nolol bulsho qaran sannadihii la soo dhaafay.
Laga bilaabo Jannaayo, Minnesota waxay leedahay sharci-dejinta keliya ee xaddidan ee qaranka. Tani waxay keentay in badan oo naga mid ah oo ka mid ah qaybta madaniga ah si aan u aragno in gobolku wali wali ku fashilmi karo siyaasadaha xalinta khilaafaadka arrimaha muhiimka ah - iyo siyaabaha keenaya mustaqbal bulsho iyo dhaqaale oo si siman, oo loo siman yahay farqiga farqiga u dhexeeya jinsiyada.
Walaacani waxa uu ka muuqday shirkii sanadlaha ee Golaha Minnesota ee aasaasiga (MCF) bishii Janaayo, halkaas oo kulankii ugu xiisaha badnaa ay diiradda saareen fursadaha lagu xoojinayo ka qaybqaadashada bulshada iyo dimuqraadiyadda. Waxay ka soo baxday Demoqraadiyada Mareykanka ee Dhibaatada, daraasad dhowaan ay maalgeliso Joyce, Kresge, iyo McKnight. Qaar ka mid ah 80 kaqeybgalayaashu waxay soo buuxiyeen qolka. Anigoo ah agaasimaha siyaasadda MCF, Bob Tracy, ayaa lagu arkay, tani ma dhicin shan sano ka hor.
Waqtiga ayaa isbeddelay - noloshana dadweynaha Minnesota iyo wixii ka baxsanba way isbeddelayaan.
"Inaan nahay hogaamiyeyaasha danaha, waxaan u baahannahay in aan eegno jimicsigeena hay'ad awoodeed, laakiin si aan habooneyn oo aan ahayn curyaan." -KADO QAABKA, KULANKA
Maaddaama ay aasaas u yihiin sida aan ku xifdinno gobollada Dhexe, halkaasoo goboladu ay sii kordhayaan xaaladaha dalxiiska, su'aashu waxay ka badan tahay waxa ku dhici doona fadhiga sharci dejinta ee soo socda (muhiim ahaan maadaama go'aannadaasi ay yihiin bulshooyinka iyo arrimaha aan daneeyno). Halkii, waxaan ku jirnaa su'aasha mudada gaaban ee dood weyn oo weyn - mid ku saabsan sida deeq-bixiyeyaashu u xoojin karaan nidaamyada iyo hay'adaha dimoqraadiyad caafimaad oo dhab ah.
Su'aalahaani waa mid si gaar ah u gaar ah gobolkan, iyo deeq-bixiyeyaasha ka kala yimid daafaha dalka oo idil - iyo adduunka - waxay awoodi doonaan inay sahamiyaan qodobkan bishan 2019 Mawaadiicda Shirwaynaha Guud ee Fiktooriya (CEP) Minneapolis-St. Bawlos, ayaa ku dooday Philanthropy xoog leh. Wada-hadalka iyo kulannada shirarka ayaa ka caawin doona ka-qaybgalayaashu inay eegaan arrimaha ku saabsan awoodda, dimuqraadiyadda, iyo nolosha bulshada ee heerar kala duwan iyo aragtiyo badan.
Hal midood, "The Billionaire-Badbaadiye Diidmada, "Waxaa ka muuqan doona Anand Giridharadas in uu la hadlayo Jeff Raikes. Giridharadas waa falanqeeye siyaasadeed iyo qoraaga Ku guuleysta dhamaantood: Abaalmarinta Elite ee Bedelida Dunida, taas oo ka dhigaysa tallaabad adag oo ah "sida dadaalka caalamiga ah ee 'isbedelka dunidu' u ilaalinayso xaaladdiisa iyo in la qeexo doorka ay ku leedahay dhibaatooyinka ay doonayaan inay xalliyaan."
Waqtiga dakhliga kala duwan iyo sinnaan la'aanta hantida, ma yaabin in buugga Giridharadas uu ku dhuftay xayndaab gudaha iyo ka fog inteena badan. Sida laga soo xigtay 2019 Edelman Trust Barometer, warbixinta sannadlaha ah ee caalamiga ah ee ku saabsan kalsoonida dadwaynaha, kaliya hal shantii qofba mid ayaa rumeysnaa in "nidaamka" ay u shaqeynayeen.
Su'aashani waxay eegtay afar qaybood si loo ogaado haddii iyo sida ay jawaab-celiyeyaashu u rumaysan yihiin in nidaamka uu ku guuldareystay:
Dareenka cadaalad daro ee ka soo horjeeda fikradda ah in dadyowga bulshadu ay wadaagaan nidaamka faa'iidadooda u gaarka ah kharashka dadka caadiga ah
Rajo la'aanta ah in mustaqbalku u fiicnaan doono iyaga iyo qoyskooda
Kalsooni la'aanta hogaamiyayaasha hay'adaha bulshada si loo xalliyo dhibaatooyinka dalka
Doonista dib-u-habeenta xoogga leh ee awoodda awoodda leh ee awood u leh inay keenaan isbedel badan oo loo baahan yahay
Mawduuc kale, oo cinwaankeedu yahay "Philanthropy iyo Siyaasadda: Maqnaanshaha Muuqashada ama Laydin istaraatiijiyadeed oo muhiim ah?, "Shaqaalaha CEP waxay wadaagi doonaan cilmi-baaris cusub oo ku saabsan sida dhaqaaleyahanku ugu hawlan yihiin siyaasadda dadwaynaha, oo si ballaaran loo qeexay, iyada oo la adeegsanayo qaabab kala duwan iyo waxqabadyo, oo ay ku xigto wada-xaajoodyo ka dhaxeeya hoggaamiyeyaasha samafalka. Goorma iyo sidee bay ufidiyayaashu u saameeyaan siyaasadda? Mabaadiida ay tahay in ay hagto maalgeliyeyaasha maadaama ay tixgeliyaan doorka saameynta siyaasadda ee istraatijiyadooda? Kuwani waa laba ka mid ah su'aalaha ugu muhiimsan ee dooddu ay daboolayso.
Aragtidayda, siyaasaddu waa xeelad istiraatiiji ah oo muhiim u ah go'aan qaadashada danaha dadweynaha. Haddii ay sidaas ku xirantahay waxay ku xiran tahay dhowr arrimood, sida sida aan fahamsanahay socodka awoodda ee bulshada iyo haddii ay naga soo horjeedaan taageerada iyo xoojinta ka qaybgalka muwaadiniinta iyo hay'adaha ka dhexjirsan beelaha, taariikhda, nidaamyada, iyo sheekooyinka xiga. Sida hogaamiyeyaasha danaha leh, waxaan u baahannahay in aan eegno jimicsigeena hay'ad awoodeed, laakiin si aan habooneyn oo aan ahayn curyaan.
Waxaan rajeynayaa inaan ku soo dhaweynayo asxaabtayda Minnesota bishan Maajo, waxaanan ka dhaadhicinaynaa mabaadii'da iyo dhaqanka xoojiya ballanqaadkayaga iyo kartida aan ka mid noqonno kuwa, si loo isticmaalo luqada Edelman, "waxay awood u leedahay inay keenaan wax badan oo loo baahan yahay isbedel. "
Tonya Allen, Madaxweynaha soo socda ee Machadka McKnight